Kungani incwadi yamaphepha iqhubeka nokushaya ibhuku ledijithali ngokudilika komhlaba? | Izincwadi Zamanje
U-Ana Lena Rivera Muñiz | | Izwe ledijithali
Maphakathi nobudala bedijithali, incwadi yamaphepha iyaqhubeka nokuba yintandokazi yabafundi bayo yonke iminyaka.
Nini thina esakhula sifunda uMortadelo noFilemón ephepheni futhi siyakuthokozela ukufunda ngefomethi yakudala kunanoma yimuphi omunye umuzwa wedijithali sesinyamalele, umhlaba uyogcwala abantu okhule ne-YouTube futhi bafunda ngezincwadi zedijithali ezibhebheni zabo.
Yize kuyiqiniso ukuthi kusasele amashumi eminyaka ukuthi kwenzeke lokho, akubonakali ngathi, ngaleso sikhathi, incwadi yamaphepha izobe seyaziswa ngaphezu kwento yomqoqi. Iphunga nokuzizwa kwephepha, ukuqabula okumnandi nokuncane okwenzeka lapho kuvulwa amakhasi, izolahlekelwa inani ngaphambi kwe izinzuzo zesisindo esiphansi, umthamo wokugcina nokuxhuma okunikwa amandla yimidiya yedijithali.
1 Ukushintsha okuhamba kancane kusuka encwadini yamaphepha kuya kwidijithali. Kungani simelana ne-ebook?
2 Idivayisi eyodwa izoba yimbangela yoshintsho olucacile.
3 Idivayisi eyodwa noma futhi ...
Ukushintsha okuhamba kancane kusuka encwadini yamaphepha kuya kwidijithali. Kungani simelana ne-ebook?
Yize sesivele sibona esitimeleni noma kubamele ibhasi lokufunda kwesizukulwane saseMortadelos impumelelo yakamuva yemibhalo ku su mobile, iqiniso ukuthi, noma ngabe ungowasiphi isizukulwane, akumnandi futhi uma ukubona kungahambi nawe, kuba ngumsebenzi ongenakwenzeka. Ezokuthutha zomphakathi, abafundi bencwadi yamaphepha bahlala ndawonye nabafundi abaphatha i-ebook yabo kanye nabangafundi kanjalo abaya kuWhatsApp noma ezinkundleni zokuxhumana kumaselula abo.
Inzuzo yamanje yencwadi yedijithali ngumthamo wayo wokugcina.
Lokhu kukwenza ube umngane omuhle weholide kubafundi abakhuthele abangadingi ukuphatha ipotimende eligcwele izincwadi zephepha ezisindayo. Esikhundleni salokho, yokufunda kwansuku zonke, lapho uyolala, uya emsebenzini noma ekhaya phakathi nempelasonto, leyo nzuzo iyanyamalala, ngoba akekho umuntu ovame ukufunda incwadi engaphezu kweyodwa ngesikhathi. Ukudela ubumnandi bephepha akususelwa kumthamo wokugcina.
Incwadi yamaphepha ayinaso kangako iso, ayinakho ukubonakala emakhasini ayo futhi ayipheli ibhethri.
Ucwaningo lwakamuva luzama ukwenza i-chip lapho okuqukethwe kwezigidi zezincwadi kungafakwa ebuchosheni.
Idivayisi eyodwa izoba yimbangela yoshintsho olucacile.
Ucwaningo lwezinkampani zobuchwepheshe luhlose ukugxila kuwo wonke amadivayisi esiwasebenzisa kukodwa (iselula, iThebulethi, ilaptop, njll.). Phakathi kokuphatha iselula nencwadi yamaphepha noma iselula kanye ne-ebook, umehluko awenele kubathandi bephepha ukuwuyeka.
Ukufika ku- idivayisi eyingqayizivele kudingeka izinto ezimbili: Lungisa usayizi ekusetshenzisweni ngakunye futhi ube namabhethri ahlala isikhathi eside.
Lapho sinawo isisetshenziswa lokho kungahle kube ne- usayizi weselula o ingabonisa izikrini zakho kuze kufike kubukhulu bethelevishini futhi akudingeki ukuthi sincike kwishaja njalo emahoreni ambalwa wokuyisebenzisa, sizoyifunda, sibuke ama-movie, sikhulume, sidlale futhi sizulazule ngayo.
Uma sengeza kulawa madivayisi iqiniso langempela, lapho sikhathele ukufunda, singahamba esitimeleni ngenkathi sivakashele i-MoMA eNew York.
Ibanga eliya emsebenzini ngeke lisabaluleka, sizobe silindele ukufika sekwedlule isikhathi.
Idivayisi eyodwa noma futhi ...
Okuhlukile kwalolu hlobo lwezinto ezisunguliwe, ngokusho kochwepheshe okunikeza isipiliyoni sangempela kakhulu futhi esivele senziwe ngaso izivivinyo zokuqala yiyona chip ebuchosheni, kepha okwamanje umuntu uthola ukuthi akukhangi kangako.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izwe ledijithali » Kungani incwadi yamaphepha iqhubeka nokushaya ibhuku ledijithali ngokudilika komhlaba?
Ngibe nomfundi we-elekthronikhi iminyaka eminingana futhi ngiyisebenzisela ukufunda amanoveli: uhlobo lokubhala olungafundwa kulolu hlobo lwedivayisi ngaphandle kobunzima besisindo futhi kube lula ukukwazi ukuphatha wonke amanoveli owafunayo futhi ushintshe ukufundwa ngendlela othanda ngayo. Kepha nginezincwadi zonke zama-eseyi ephepheni ngoba kulula kimi ukulungisa imibono ngokubuyela emuva eshidini lokudwebela imiqondo noma ukubhala phansi amaphuzu oseceleni: i-e-book ayikakutholi lokho. Ngakolunye uhlangothi, izincwadi zama-eseyi yizincwadi ezifanele ukufundwa izikhathi eziningana futhi kuwusizo olungenakulinganiswa ukuthola lezo zincazelo esemajini ukuze sichaze kabusha noma siphinde sihlaziye lokho umlobi afuna ukukusho.
U-Alejandro Palma Zenteno kusho
Kuyangijabulisa, njengomfundi wethebhulethi, ukuthi izincwadi eziphrintiwe ziyaqhubeka ziheha ukufunda. Noma ngubani ohamba ngezithuthi zomphakathi noma onesifo sokuqwasha futhi ujatshuliswa ngokufunda okokusebenza ngogesi ulungile. Umthandi wezitolo ezidayisa izincwadi nokubuyekeza izindaba, ebuza ngezincwadi jikelele, kwenzeke isimo esikhetheke kakhulu, cishe ukuguqulwa kwengqondo ngoba angisaqhubeki nomtapo wezincwadi wami womzimba, esikhundleni salokho ngiwukhulise ngekhompyutha. Ngikubona kuyethusa ukuphikisana ngokuthi yini noma yikuphi okungcono, kungcono ngizame ukuzibheka ngesikhathi sami, lapho nginokungathandi okukhulu ezinkundleni zokuxhumana yize ngine-Facebook ne-Twitter, futhi kuyangikhathaza ukwazi ukuthi kufundwa kuphi uyahamba. I-chip ebuchosheni engayifunda, noma okunye ukubonakaliswa okubonakalayo, ngicabanga, kuzoba yinto ekwazi ukuphuma enkingeni ezingeni lomhlaba - ikakhulukazi elezizukulwane - lapho kutholakala khona ukufunda. Kuyinselelo ekhomba ikusasa ebelilizolo!
Phendula u-Alejandro Palma Zenteno